Baaxadda Shiinaha 900mm 1130mm upvc go'yaal dabool caag soo saarayaasha iyo alaableyda | JIAXING
Nooca alaabta: Xaashida saqafka UPVC
Qaab: Mawjadaha Jiingado
Nooca Lakabka: Lakabka keliya; 3 Lakab ， 4 Lakab
Midabka: Cagaar Caddaan, Buluug, Jaale, Grey （La Macaamilay)
Ballaaran: 720mm, 930mm, 1130mm, 1350mm
Dhererka: Sida laga soo xigtay macmiilka weydii (Normal max 12meter)
Dhumucdiisuna: Guud ahaan 0.8mm-3.0mm
Codsiga: Warshad heer sare ah, warshad bir ah, bakhaar, suuqa beeraleyda iyo gawaadhida xamuulka, iwm.
1. Xirfad-yaqaan ahaan inta ugu badan soo-saaridda wax soo saarka saqafka, XINGFA waxay maal-gelinaysaa 8 milyan oo doolar si ay u dhisto 20000 mitir oo laba jibbaaran warshad iyo xarun suuq-geyn ah oo ku taal TianJin.
2. 16 khadadka wax lagu duubo iyo qalab horumarsan oo ka samaysan dhagxaanta birta ka samaysan birta iyo nidaamka biyo mareenka PVC.
3. Alaabooyinka laga sameeyay Faransiiska oo ay naqshadeeyeen naqshadeeyayaasha ugu sarreeya Kanada! Dhammaan alaabooyinka saqafku waa tayo sare Sida zealand cusub iyo Kuuriya! Markaa JIAXING dhagaxiisa dahaaran yahay biraha saqafka birta ah wuxuu damaanad qaadayaa 35-50 sano iyo nolosha qofka oo dhan! Weligaa midab ha libin!
4. JIAXING waxay siisaa alaabooyin la habeeyay iyadoo loo eegayo baahida macaamiisha.
5. JIAXING waxay u dammaanad qaadaysaa qiimaha ugu fiican, tayada iyo qancinta macaamiisha.
6. JIAXING Roof's chip chip alwaaxda birta ka samaysan waxay ka kooban yihiin sagaal lakab oo salka ku haya bir bir ah. Waxaan damaanad qaadaynaa cimri dhererka alaabtayada. Waxaan sii wadi doonnaa sameynta kaliya saqafka saqafka ugu fiican ee hagaajin doona deegaankeena nool.
Sida dhismaha sariirta, daaraha, warshadaha cuntada iyo dawooyinka, isbitaalada, iskuulada iyo daaraha warshadaha, oo si weyn loogu isticmaalo guryaha la degan yahay, villa, aqoon isweydaarsiga, bakhaarka, nalalka dhismaha, aqalka dhirta lagu koriyo, guriga guurguura, gidaarada sanqadha-sanqadha iyo sanaadiiqda xayeysiinta iwm. alaab-qeybiyaha idman ee dusha saqafka loogu talagalay mashaariic badan oo waaweyn oo dawladeed oo ka socda Shiinaha, iyo sidoo kale Bariga Dhexe, Koonfurta Ameerika iwm.
1. Nidaamka xakamaynta tayada xirfadeed iyo bixinta waqtiga,
2. Siinta hagitaan farsamo ee rakibida.
3. OEM & ODM, sidoo kale waxay bixiyaan adeeg habeysan.
4. U qalma SGS / ISO9001 / CE
5. Waxaad ku siisaa talobixin xirfadeed qaabeynta injineernimadaada.
6.Waxaan ku qarin doonnaa aagga iibka macaamiisha, fikradaha naqshadeynta iyo dhammaan macluumaadka kale ee gaarka loo leeyahay.
Alaabada la Xiriira (Dhammaan astaanta saqafka UPVC)
waxaa la aasaasay 1998 waana soo saaraha hormuudka ka ah balaastigga (PVC / FRP / PC) saqafka iyo darbiyada darbiyada Shiinaha. Kadib 10 sano oo horumar ah, shirkadeena waxay leedahay awood soosaar sanadle ah oo qiyaastii ah 6 milyan oo mitir murabac ah,Waxaan si kal iyo laab ah u soo dhaweynaynaa macaamiisha cusub iyo kuwa duugga ah ee gorgortanka ganacsiga, wada xiriirka iyo horumarka wadajirka ah!
Hore: Pc Xawaaraha-Wall Transparent 8Mm Polycarbonate Hollow Sheet
Xiga: dusha sare xaashida caaga balaastikada caaga 1070 dherer balaastig ah
ilaalinta UV caag saqafka dusiyeen caag caag ah ...
sheet saqafka jiingado saqafka ah PCV saqafka
Jiingado caaga PVC UPVC APVC saqafka Sheet
Xaashida saqafka sare ee jiingadda Upvc
miisaanka saqafka ah sheet xaashiyaha caaga jiingado ...
Sheet saqafka jiingado PVC xaashiyo saqafka